Shir kooxda TPLF soo abaabushay oo fashil kudhamaaday. | ogaden24
Shir kooxda TPLF soo abaabushay oo fashil kudhamaaday.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in uu natiijo la’aan kusoo dhamaaday iskuday ay xukuumada wayaanuhu kudoonaysay in ay kuqabtaan shir majaro habaabin ah.
Shirkan oo ay kooxda TPLF mudo sooqaban qaabinaysay ayaa looga gol lahaa in bulshada Itoobiyaanka ah iyo beesha caalamka lagu jiha wareeriyo isla markaana shirka loo ekaysiiyo shir wada tashi ah.
Shirkan ayay kooxda TPLF ugu magac dartay shir wada tashi ah waxayna kucasuuntay dad kabadan ku qof oo isugu jira aqoonyahan iyo dad magac leh waxayna sheegeen in ladoonayo in ladhagaysto fikirka aqoonyahanka.
Ma aha markii ugu horaysay ee shir been abuur ah oo bulshada lagu khaldayo ay kooxdu qabato, hase yeeshee dadka shacabka ah iyo dowladaha aduunka ayaa bartay dhagarta kooxda TPLF.
Sikastaba ha ahaatee dadka lagu marti qaaday shirka ayaa go’aansaday in aysan ka qayb galin shirkan marin habaabinta ah ee loogu yeedhay wada tashiga waxayna kooxdu ku hongowday iskudaygii ay bulshada ku khaldi rabeen.